Mpanova - China Shandong Huaxin Electric Lafaoro
Mpanova 1.Distribution mpanova: Solika aroboka fizarana mpanova sy ny fitaovana mpanova herinaratra ny 2.Characteristics: Ny fanatanterahana ny dingana telo-menaka-aroboka mpanova manaraka ny fari-GB 1994-1996 "Power mpanova" sy GB / T6451-2008 "Technical fikirana sy zavatra takian'ny dingana telo-Oil-aroboka Power mpanova ". Ny vokatra dia be mpampiasa eo amin'ny fitondrana sy ny fizarana ny fifindran'ny indostria sy ny fambolena hery tambajotra. Ny vy fototra na ny fanaka tsara hatsiaka -...
Oil naroboka distribution sy ny fitaovana mpanova herinaratra ny mpanova
Ny fanatanterahana ny dingana telo-menaka-aroboka mpanova manaraka ny fari-GB 1994-1996 "Power mpanova" sy GB / T6451-2008 "Technical fikirana sy ny fepetra Telo-dingana Oil-aroboka Power mpanova".
Ny vokatra dia be mpampiasa eo amin'ny fitondrana sy ny fizarana ny fifindran'ny indostria sy ny fambolena hery tambajotra.
Ny vy fototra na ny fanaka tsara mangatsiaka -rolled silisiôma taratasy vy, ary ny coil kalitao na ny fanaka varahina oksizenina-maimaim-poana, mampiseho fomba fijery tsara sy azo antoka mihazakazaka.
Iron fototra na ny fanaka mangatsiaka-nanakodia silisiôma-taratasy vy avo amin'ny conduction ny fanindrahindram-mitarika sy mandany rafitra fisaka, ka dia ny andriamby lalana dia fohy, ny fatiantoka sy ny tabataba haavon'ny dia ambany;
Hamintinana ireo tariby no natsangana ho an'ny miolikolika toy izany fatiantoka ambany ary manana fahaizana tsara hahatohitra fohy-faritra;
Ny anjara mandany maika manokana izay mety fomba azo antoka axial antoka tsindry;
Ny solika no lakolosy karazana tanky ny rafitry ny lovia feno karazana mbola hanohon, manana tsara ivelany, ary mora ho an'ny fikojakojana
Azo itokisana: in-fanompoana rehetra vokatra tsy misy fahasimbana na solika leakage nitranga;
Oil fitoeran-tsoliky samihafa karazana sy ny rafitra tsara tarehy.
Previous: Resistance Lafaoro
Next: Rano hihena System (Tilikambo)